XOG: Kalane oo boorsooyin lacag ah ka dejiyay Baydhaba - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon XOG: Kalane oo boorsooyin lacag ah ka dejiyay Baydhaba
XOG: Kalane oo boorsooyin lacag ah ka dejiyay Baydhaba
Ilo-wareedyo kala duwan ayaa Allbanaadir Media u sheegay in Cabdullaahi Aadan Kulane oo ka tirsan saraakiisha hay’adda NISA ee aadka ugu dhow madaxweyne Farmaajo uu ku sugan yahay Baydhaba, oo ay ka bilaabatay doorashada baarlamaanka.
Kulane oo dhowaan uu xilkii madaxa shaqaalaha ee NISA ka qaaday ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaa taliyaha NISA Fahad Yaasiin wuxuu u magacaabay kaaliyaha dhanka siyaasadda iyo amniga ee hay’addaasi
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in Kulane uu todobaadkii tegay uu boorsooyin lacag ah geeyay Baydhaba, kuwaasi lagu soo saaray shan kursi oo kamid ah Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa la filayaa in sii joogo Baydhaba ilaa uu ka shaqeeyo soo saaritaanka xildhibaano taabacsan Madaxtooyada Soomaaliya, isaga oo arrintaas kala shaqeyn doona madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta-gareen, oo ka mid ah taabiciyiinta Farmaajo.
Wararka aan helayno ayaa sheegaya in uu qeyb ka yahay shaqsiyaadka go’aanka ka gaaraya Xildhibaanada lasoo saarayo iyo sidoo kale in uu lacago ku taageeri doono Murashaxiinta ay wadato Villa Somalia, taasi oo uu uga wakil yahay Farmaajo.
Kulane Jiis oo saaxiib iyo ehalba la ah Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in sidoo kale uu tagi doono magaalooyinka Jowhar iyo Dhuusamareeb, si uu uga shaqeeyo soo saaridda xubno taabacsan Madaxweyne Farmaajo.